Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee lafa heektaara 52,000 seeraan ala kanniin qabataniif woraqaa abbummaa kennuuf - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee lafa heektaara 52,000 seeraan ala kanniin qabataniif woraqaa abbummaa...
Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee lafa heektaara 52,000 seeraan ala kanniin qabataniif woraqaa abbummaa kennuuf
Lafti bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala jirtu hundi kan qabamte bifa seera qabeessaan hinturre. Hedduun namootaa lafa daangaa magaalaa Finfinnee irratti argaman bifa seera dhabeessa ta’een, yeroo heddu mallaqa xiqqoon, qotee bulaa irraa kan bitaa turan. Egaa namoota bifa kanaan lafa fudhatanii jiraataa turaniif bulchiinsi magaalaa Finfinnee galmeessuun woraqaa abbummaa lafaa namoota kanniiniif mirkaneessu laatuuf kan murtee irra gahe.
Akka labsii kanaatti namoota 44,547 woraqaa raga argatuuf deema. Labsiin kuni lafa heektaara 52,000 ta’u ilaallata. Labsiin haarofni bahe kuni namoota lafa bara 1996 hanga 2005 jiddutti seeraan ala fudhataa ykn qotee bulaa irraa bitaa turan irratti qiyyaafata. Bifuma wolfakkaatuun bara 2010 mootummaan namoota 60,000 seeraan ala lafa qabatanii ykn osoo hingalmoofne jiraataa turaniif woraqaa abbaa lafaa isaan godhu laatuu agarsiisa ibsi bulchiinsi magaalaa Finfinnee baase.
Bulchiinsi magalaa Finfinnee lafa km2 540 irra jiraachuu isaa agarsiisa ragaan mootummaa. Lafti amma woraqaan seeraa laatamaaf jedhame ammo km2 520. Egaa kuni hiikkaa lama qabaachuuf deema jedhu taajjabdoonni nuti dubbifne. Inni jalqabaa, wolakkaan lafa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hanga ammaatti seeraan ala qabamee irraa jiraatamaa ture kan jedhu. Inni lammaffaa, lafti bulchiinsa magalaa tanaa labsii amma bahe kanaan dachaa ta’uuf deema jechuudha. Inni lammataa kuni dhugaa taanaan lafti kuni bulchiinsa Oromiyaa, qotee bulaa Oromoo irraa seeraan ala kan qabame ykn bitame, bifa biraan gara bulchiinsa Finfinnee jala seenuuf jedhu taajjabdoonni. Lafti km2 520 bulchiinsa tokkoon alatti woggaa 9 hanga 18 jiraachuu kan hindandeenne ta’uudha namoonni kan dubbatan.
Kana dura bara 2010 namoota 60,000 woraqaan abbummaa lafaa mirkaneessu kenname. Ammas bara 2015 keessa namoota seeraan ala lafa qabataniif woraqaa laatuun dhimma imaammata guddinaafi bulchiinsaa qofa jechuun nama dhibaa jedhu taajjabdoonni. Akka tajjabdootaatti tankaarfiin amma fudhatame kuni tarii filannoo 2015 injifachuuf jecha dhaabbanni angoo irra jiru yaadee kan godheedha.
woraqaa ragaa lafaa
Previous articleKiristiyaanoo Ronaaldoon FIFA Ballon d’Or bara 2014 injifate
Next articleMootummaan Itoophiyaa lammiiwwan Britaaniyaa 3 hidhe, yakki goolii uumuuf yaaluu